नेपालमा ७ प्रतिशत महिला चुरोट तान्छन्, फलफूल खाने नेपाली एक प्रतिशत मात्र. – Sabaikoaawaj.com
नेपालमा ७ प्रतिशत महिला चुरोट तान्छन्, फलफूल खाने नेपाली एक प्रतिशत मात्र.
शुक्रबार, बैशाख १, २०७४ 8:16:15 PM	मा प्रकाशित
काठमाडौं, १ वैशाख /पुरुषहरुले धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरेको त हामीले सुनेकै छौं । तर, नेपालमा चुरोटको धुवाँ उडाउने महिलाको संख्या पनि कम छैन ।
सहरका कफीसप र क्याफेहरुमा चुरोटको धुँवा उडाइरहेको भेटिनेहरु नयाँ पुस्ताका लम्मली हुन् भने गाउँघरमा पुरानो पुस्ताका महिलाहरुले पनि सूर्ति सेवन गर्नेगरेको पाइन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक तथ्यांक अनुसार नेपालमा ७ प्रतिशत महिलाहरुले धुम्रपान गर्ने गरेको पाइएको छ ।
जनसंख्याको झण्डै ५० प्रतिशत पुरुषहरुमा धुम्रपानको लत रहेको छ । तीमध्ये झण्डै १७ प्रतिशतले नियमित चुरोट सेवन गर्ने गरेको पाइएको स्वास्थ्य सचिव सेनेन्द्रराज उप्रेतीले शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बताए ।
सचिव उप्रेतीले भने, ‘हामी चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा त गर्छौं, तर एउटा तथ्यांक हेर्दा हामीकहाँ फलफूल खानेभन्दा चुरोट खानेकै संख्या बढी देखिएको छ ।’
यसबाहेक, झण्डै ६० प्रतिशतले मद्यपान गर्ने गरेको समेत सचिव उप्रेतीले बताए । उनका अनुसार नेपालमा जम्मा एक प्रतिशत मानिसले मात्रै नियमित फलफुलको सेवन गर्ने गरेको पाइएको छ ।
त्यस्तै, प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो आहारमा दैनिक १२ ग्राम नुन समावेश गर्ने गरेको पाइएको छ । यो अनुपात भनेको शरीरलाई चाहिने नुन भन्दा झण्डै सात ग्राम बढी छ । विज्ञहरुका अनुसार हाम्रो शरीरलाई दैनिक ५ ग्राम नुनको आवश्यकता पर्छ
नसर्ने रोगका मृत्यु हुनेको संख्या बढी
नेपालमा सरुवा रोगको तुलनामा नसर्ने रोगका कारण मृत्यु हुनेको संख्या समेत बढेको एक तथ्यांकले देखाएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सन् २०१४गरेको एक अनुसन्धान अनुसार नेपालमा नसर्ने रोगका कारण मृत्यु हुनेको संख्या वर्षेनी एक लाख ८६ हजार पुग्ने गरेको छ । त्यसमध्य प्रत्येक पाँचजनाको मृत्युमध्ये तीनजनाको मृत्युको कारण नसर्ने रोग हुने गरेको पाइएको छ ।
त्यसबाहेक अस्पतालमा भर्ना हुने कुल विरामी मध्ये ६० प्रतिशतमा नसर्ने रोगको समस्या देखिने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै २५ प्रतिशत युवामा उच्च रक्तचापको समस्या तथा नब्बे प्रतिशत मानिसहरुले उच्च रक्तपाचको औषधी सेवन नगर्ने पाइएको समेत तंथ्याकमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित मितिः शुक्रबार, बैशाख १, २०७४ 8:16:15 PM